သငျသညျမနှစ်ကရေကန်ဓာတုပစ္စည်းအပေါ်ဘယ်လောက်သုံးဖြုန်းခဲ့တာလဲ သင်ဟာရေကူးကန်ပိုင်ရှင်အများစုနှင့်တူသည်ဆိုလျှင်အဖြေသည်များလွန်းသည်။ အမှန်တရားကတော့သင့်ရေကူးကန်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အရာတော်တော်များများမလိုအပ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေကန်စောင့်ရှောက်မှု၏ “ BBB” နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သင်၏ရေကူးကန်အတွက်သင်ဘာလိုအပ်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ လုယူသောသူသတိပေး: ဒါဟာသင်ထင်စေခြင်းငှါထက်အများကြီးလျော့နည်း!
BBB နည်းကဘာလဲ။ ၎င်းသည်ရေကန်၊ အရောင်ချွတ်စက်၊ ဆိုဒါနှင့် borax တို့လိုအပ်သည့်ရေကန်စောင့်ရှောက်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းအခြားလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်ဝင်ခွင့်ပြုမည်။ သင်သည်ရေကန်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးချပါကသူတို့သည်သင့်ရေကန်ကိုထိန်းသိမ်းထားပုံဖြစ်သည်။ သူတို့ကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်လုပ်တယ်။ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဈေးလည်းပေါတယ်။ မင်းစဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုငါသိတယ်။ “ အရောင်ချွတ်သည်။ ငါ့အတွက်မကောင်းဘူးလား?” သင်၏ဒေသခံရေကူးကန်စတိုးဆိုင်ကိုမေးမြန်းပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားမှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်စေရန်သင့်အားဆင်ခြေပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ယင်းသည်မဟုတ်ပါ။ များစွာသောအရာကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အရောင်ချွတ်အရောင်ချွတ်အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းဆိုဒီယမ် hypochlorite ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ကလိုရင်းတွင်ပါဝင်သောအရာသည်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ပိုလိုရီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းအရောင်ချွတ်ဆေးရည်နှင့်ကလိုရင်းအရည်နှစ်မျိုးလုံးတွင်တူညီသောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းရှိသည်။ ဒီနည်းလမ်းအတွက်အကြမ်းဖျင်း 8% + hypochlorite နှင့်ရေမွှေးများသို့မဟုတ်အခြားအဘယ်သူမျှမပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏စတော့ရှယ်ယာများအားပုံမှန်လွှဲပြောင်းပေးသော Walmart ကဲ့သို့သောနေရာများမှ ၀ ယ်ယူသင့်သည်။ Lowe နှင့် Home Depot တို့ကိုရှောင်ပါ။ သူတို့၏အရောင်ချွတ်သည့်အရာသည်လအတန်ကြာထိုင်ပြီးသူတို့သည်လည်းစျေးကြီးသည်။
ဤ BBB နည်းဖြင့် pH, chlorine နှင့် alkalinity များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းသည်။ ကယ်လစီယမ်မာကျောမှု၊ သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားချိန်ခွင်များမှာအရေးကြီးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဤအဆင့်များမြင့်တက်လာပါက၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာရေအချို့ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအလားအလာမပါဝင်သောရေချိုနှင့်ပြန်လည်ဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည် အစိတ်အပိုင်းများ။ ရေရှည်တွင်တွင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းထက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယိုစီးမှုနှင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် pH ကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်ကလိုရင်းပမာဏမြင့်တက်စေရန်အရောင်ချွတ်ဆေးကိုသုံးပါ။ များသောအားဖြင့်သင်သည်ဤပုံသေနည်းမှသွေဖည်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤပုံသေနည်းမှချွင်းချက်တစ်ခုမှာသင်၏ pH သည်မြင့်မားလာပါကဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင် muriatic acid အချို့ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ထိုအခြေအနေများမှာရှားသည်။
သင့်အိမ်၌သင့်ရေကန်၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သောစွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ Amazon မှာ (သို့) ရေကူးကန်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ Taylor K-2005 စမ်းသပ်ကိရိယာကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ သင်၏စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံနှင့်အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက် (သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်“ BBB pool method calculator”) မှအချက်အလက်များကိုသုံးပါ။ ဤတွက်ချက်မှုကသင့်ရေကူးကန်အတွက်သင်လိုအပ်မည့်အတိအကျကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဒါပဲ! ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအပိုင်း – ပျမ်းမျှရေကူးကန်ပိုင်ရှင်သည်ရာသီအတွက်ဂါလံ ၂၅၀၀၀ ရေကန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၉၅၀ ခန့်သုံးစွဲသည်။ BBB နည်းလမ်းဖြင့်ထိုရေကန်တစ်ခုတည်းအတွက်ဒေါ်လာ ၄၅၀ ခန့်သုံးစွဲရန်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ Trouble Free Pool Care မှဖိုရမ်အား BBB နည်းဖြင့်စတင်ရန်သင်လိုအပ်ကောင်းအကူအညီလိုသည်။
Ryan Wheeler သည် Ducks Pools တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးသူ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကရေကူးကန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။